समाचार - फुरफुरल भनेको के हो?
फुरफुरल भनेको के हो?
फुरफुरल एक रसायन हो जुन जैविक पदार्थबाट बनेको हुन्छ जुन सामान्यतया औद्योगिक उद्देश्यका लागि उत्पादन गरिन्छ। यो मुख्यतया ओट हस्स, ब्रान, कर्नकोब्स, र काठको जस्ता कृषि उप-उत्पादनहरूले बनेको हुन्छ। यसमा प्रयोग गरिने केहि उत्पादनहरूमा झारको किलर, फicide्गनाइड, र विलायक समावेश छन्। यो यातायात ईन्धनको उत्पादन र स्नेहक तेलहरूको शोधनको प्रक्रियामा पनि परिचित तत्व हो। रसायन धेरै अन्य औद्योगिक एजेन्टको उत्पादनमा पनि एक तत्व हो।
urfural जैविक पदार्थबाट बनेको एक रसायन हो जुन सामान्यतया औद्योगिक उद्देश्यका लागि उत्पादन गरिन्छ।
जब द्रव्यमान उत्पादन गरिन्छ, यो रासायनिक पेन्टोसन पोलिसेकेराइडहरू राखेर एसिड हाइड्रोलिसिस प्रक्रियाको माध्यमबाट बनाईन्छ, यसको मतलब सेल्युलोज र आधार सामग्रीको स्टार्च एसिडको प्रयोग गरेर चिनीमा परिणत हुन्छन्। एयरट्याट कन्टेनरमा, फरफुरल चिपचिपा, रंगहीन र तेलदार हुन्छ र यसको बादामजस्तो गन्ध हुन्छ। वायुको एक्सपोजरले तरल रंगमा पहेँलो देखि खैरो रंगमा रंगाउन सक्छ।
फुरफुरल ईथर र इथानोलमा केहि पानी घुलनशील र पूर्ण रूपमा घुलनशील हुन्छ। एकान्त रसायनको रूपमा यसको प्रयोगको अतिरिक्त, यो रसायनको उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ furan, फरफुयल, नाइट्रोफुरन्स, र मेथिलफुरान। यी रसायनहरू कृषि रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, र स्टेबलाइजरहरू सहित उत्पादनहरूको अगाडि निर्माणमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन मानिसहरू फरफुरलसँग सम्पर्कमा आउँछन्। प्रशोधनको क्रममा रासायनिक जोखिमको साथसाथै, यो खानामा विभिन्न प्रकारहरूमा प्राकृतिक रूपमा फेला पार्न सकिन्छ। यस प्रकृतिको प्रकाश एक्सपोजर हानिकारक हुन सकेको छैन।
फरफुरलमा भारी जोखिम विषाक्त हुन सक्छ। मानव र जनावरहरूमा प्रयोगशाला परीक्षणहरूमा, फरफुरल छाला, श्लेष्म झिल्ली र आँखाको जलन हो। यसले कथित घाँटी र श्वासप्रश्वासको मार्गको बेचैनी पनि ल्याएको छ। केहि कमजोर भेन्टिलेसन भएको क्षेत्रहरूमा रासायनिक संपर्कमा अल्पकालीन प्रभावको रिपोर्ट गरिएको छ: सास फेर्न गाह्रो, एक सुन्न जीभ, र स्वाद गर्न असमर्थता। यस प्रकारको एक्सपोजरको सम्भावित दीर्घकालीन प्रभावहरू छालाको अवस्था जस्तो देखिन्छ एक्जिमा र दर्शन समस्या र पल्मोनरी इडेमामा फोटोसेनेटाइजेशन।
फुरफुरल पहिलो पटक व्यापक प्रयोगमा आएको थियो १ into २२ मा जब क्वेकर ओट्स कम्पनीले ओट हलबाट उत्पादन गर्न शुरू गर्‍यो। ओट्स रासायनिक बनाउनको लागि एक सबैभन्दा लोकप्रिय तरीका हो। त्यस भन्दा पहिले यो नियमित रूपमा केहि ब्रान्डको अत्तरमा प्रयोग गरिन्थ्यो। यो पहिलो पटक १ 1832२ मा जोहान वोल्फग्यांग डेबेरिनर द्वारा विकसित गरिएको थियो, जो जर्मन रसायनविद् जो कि कमिलाको लासलाई फार्मिक एसिड बनाउन प्रयोग गरिरहेका थिए, जसमध्ये फरफ्युरल एक उप-उत्पाद हो। कमिलाहरूले रसायनको निर्माणमा प्रभावकारी भएको विश्वास गर्दछन् किनकि उनीहरूको शरीरमा हाल प्रशोधनको लागि प्रयोग गरिने बोटबिरुवा पदार्थहरू थिए।
पोष्ट समय: अगस्ट १ 13-२०२०
शेन्क्सियन शुयुआन नयाँ ऊर्जा टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
फोन: ० :8686 + १9635666060०60